Uyenza njani i-flash blink kwi-iPhone xa ubiza | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | IPhone iindaba, Izifundo kunye neencwadana
Kukho izixhobo ezininzi, ukongeza kwisilumkiso se-acoustic kunye nokushukuma, kubandakanya isilumkiso esibonakalayo. Isilumkiso esibonakalayo sihlala sisi-LED esilumkisa ukuba balapha okanye basibizile. Ezinye zezi zixhobo zine-LED ekhupha ukukhanya okungafaniyo ngokuxhomekeke kwisicelo esisazisileyo, njengoluhlaza kuWhatsApp, luhlaza okwesibhakabhaka ngeSkype, okanye iorenji xa ufowuna. Okwangoku akukho iPhone ine-LED enje, kodwa singenza ifayile ye Ifleshi iyajika xa kungena isaziso.
Ukuba kufuneka ndinyanisekile, ukuba isibane sivuliwe ngelixa besitsalela kubonakala ngathi asiloncedo ukuba asinangxaki zokuva, kuba, kwiimeko eziqhelekileyo, nanini na xa i-iPhone isondele kuthi isilumkiso okanye uqaphele ukungcangcazela, Kodwa kusenokubakho iimeko apho kunganomdla khona, umzekelo, ukuba ifowuni siyishiya phezu kwetafile ngelixa sisenza itheko elinomculo ongxolayo. Ewe kunjalo, iya kuba njalo iluncedo kubantu abangeva kakuhle.
1 Uyiguqula njani i-iPhone flash kwisaziso se-LED
2 Ngaba iApple iya kuyazisa i-iPhone ene-LED yezaziso?
Uyiguqula njani i-iPhone flash kwisaziso se-LED
Sivula useto lwe-iPhone.
Singena kwicandelo ngokubanzi.
Emva koko sijonga kunye nokufikelela kuFikelelo.
Okokugqibela, siyatyibilika phantsi kwaye, kwicandelo LOPHANDO, sisebenzisa iswitshi ethi Ukudanyaza izilumkiso ze-LED.
Kucacile ukuba izalisekisa umsebenzi ngeli xesha sifumana izaziso, kodwa ayisiyiyo inkqubo epheleleyo. Ndingathi zimbini izinto ezingekhoyo ukuze ibe:
Isaziso asiphindiwe. Oku kuthetha ukuba isebenza kuphela okomzuzwana xa ivakala. Kusengqiqweni ukuba sijonga ukuba le nkqubo i-Apple ibandakanyiwe yenzelwe abantu abaneengxaki zokuva. Singathi "Kwaye kutheni ingagcini ukukhanyisa ukulumkisa ukuba kukho isaziso esisalindileyo?", Yeyiphi impendulo elula kakhulu: i-iPhone ayinaso i-LED yesaziso, sele siyazi le nto, kodwa isebenzisa ntoni kunjalo kukukhanya kwefoto. Ukukhanya kwekhamera kuyilelwe ukukhanyisa imiboniso kwaye ibenze babonakale behle. Oku kukhanya kudla amandla amaninzi, ke ukuba sifumana isaziso, isibane siyadanyaza kwaye asikho ngaphambili ukuyinqanda, kunokwenzeka ukuba, xa sikuqonda, ibhetri yehle kakhulu. Ukuzimela njengenye yeengxaki zeefowuni ze-touchscreen, oku akubonakali ngathi yinto efanelekileyo.
Yazisa kuphela ngombala omnye. Nangona i-iPhone isebenzisa ukukhanya kweTone eyiNtloko ekhupha ukukhanya ngemibala eyahlukeneyo yeqondo lobushushu kwii-5s ze-iPhone, izaziso zeflash zihlala zimhlophe. Ukuba umntu ongeva kakuhle ubona i-iPhone yakhe imlumkisa "ngento" ngokukhanya, lo mntu akakwazi ukuxelela ade asondele kwaye abone iscreen ukuba ngaba isaziso sikhankanywa ku-Twitter, i-WhatsApp okanye i-alam.ingayingxaki leyo.
Ngaba iApple iya kuyazisa i-iPhone ene-LED yezaziso?
Ukuba kufuneka ndinyanisekile, ndiyathandabuza. Kuyinyani ukuba ezi ntlobo ze-LED azithathi ndawo zininzi kwaye zinokongezwa phantse naphina, kodwa umbuzo ngulo Baza kuyibeka phi? Ukujonga i-iPhone 6s emhlophe ngaphambili, isixhobo sele sinemingxunya emithathu ngaphezulu: enye yesithethi, enye yekhamera kunye enye yesenzwa sokukhanya. Akubonakali ngathi kunokwenzeka ukuba iApple igqibe ekubeni yongeze umngxunya wesine, okanye ingafaki isaziso esikhokelweyo.
Ukongeza, iinkampani zetekhnoloji zizama ukupakisha izinto ezininzi kangangoko kunyawo oluncinci. Kuthiwa esinye sezizathu zokuba kutheni iPhone 7 Ayizukuba nejack ye-3.5mm, kungenxa yokuba isixhobo sibhityile kune-iPhone 6 esele ibhityile. Kuyabonakala ukuba, i-LED yesaziso yinxalenye yesixhobo esine-Apple esala isixhobo ukuba sigcine uyilo ngaphandle kokulayisha ngaphezulu.
Into esiya kuyibona ngokuqinisekileyo kwikamva yile isixhobo esisebenza njenge-LED zezaziso. Sele zininzi iiprojekthi zeKickstarter ezibonise iimeko zolu hlobo, ezinje ngeLunacase onayo kumfanekiso ongaphambili osilumkisayo ukuba bayasibiza kwaye basebenzise amandla aphuma kwi-iPhone. Ngamanye amagama, kuthatha ithuba lamandla ajikeleze isixhobo ukukhupha ukukhanya kwesilumkiso.
Ngayiphi na imeko, nangona ingayinto entle ukubona izaziso ezilindelweyo ngemibala eyahlukeneyo, ndiyaqonda ukuba iApple ibeka phambili kwezinye izinto, njengekhamera yeelensi ezimbini ekulindeleke ukuba ivele kwisandla se-iPhone 7 okanye isikrini AMOLED , ngokutsho kwamahemuhemu, eza kufika kwi-2018 enethuba lokuba siza kuyibona kwi-iPhone 7s. Ngaba uyaphoswa sisaziso se-LED kwi-iPhone?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Uyenza njani i-flash blink kwi-iPhone xa benditsalela umnxeba
UFabiola wenyuka sitsho
Ndingadanyaza njani xa enditsalela umnxeba kutheni ejongeka ngathi akafani ndine-iPhone 6
Phendula uFabiola Rosa
UMIRIYAM SANTOS LOPEZ sitsho
Molo mhlobo, unga
Phendula UMIRIAM SANTOS LOPEZ
Ndine-iphone 6s kunye kwaye ukuba isikhokelo sikhokelwe sasebenza kodwa sele ndinentsuku ezininzi ukuba hayi ... sele ndiyibuyisile kwaye ndihlaziye inguqulelo yamva nje kwaye akukho nto. Nceda!!
Kwenzeka into efanayo kum, ngaba ungayicombulula?
Ndingayisebenzisa njani ifleshi kwifowuni 7
Ndingabulela kakhulu kuwe
UDANIELA JUSTO sitsho
NDINAYO I-6PLUS kwaye andikwazi. UNGANDIKHOKHELA NCEDA !!
NDANDISELE NDIWALANDELA AMANQAKU ANGASentla. ENKOSI!
Phendula kuDANIELA JUSTO
Uthathe uncedo xa ebembopha ukuze iphone 8plus iselfowuni ilayite xa benditsalela okanye xa bethumela umyalezo, ndincede.